Fahasoavana sy Fanantenana - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Fahasoavana sy fanantenana
Ao amin'ny tantaran'ny Les Miserables (Ilay Ory), dia nasaina ho any amin'ny tranon'ny eveka i Jean Valjean rehefa nivoaka ny fonja, nomena sakafo sy efitra iray ho an'ny alina. Nandritra ny alina dia nangalatra ny volafotsy i Valjean ary nandositra, saingy tratran'ny zandary, izay nitondra azy niverina tany amin'ny eveka niaraka tamin'ireo entana nangalarina. Tsy niampanga an’i Jean anefa ny eveka, fa nanome azy fanaovan-jiro volafotsy roa ary nilaza fa nomeny azy ireo zavatra ireo.
Jean Valjean, izay mafy fo sy niziriziry tamin’ny sazy an-tranomaizina naharitra ela noho ny halatra mofo hamelomana ny zanaky ny anabaviny, dia lasa olona hafa noho io asa soa nataon’ny eveka io. Tsy naverina tany am-ponja izy, fa afaka nanorina fiainana marina. Raha tokony hiaina ny fiainan’ny voaheloka izy dia izao no nomena fanantenana. Tsy izany ve no hafatra tokony ho entintsika amin’izao tontolo izao efa mihamaizina? Nanoratra toy izao ho an’ny fiangonana tany Tesalonika i Paoly: “Fa Izy, dia Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra Raintsika, Izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin’ny fahasoavana, dia hampionona ny fonareo sy hampahery anareo amin’ny asa tsara rehetra sy Teny »(2. Tes 2,16-17).
Iza no loharanon’ny fanantenantsika? Andriamanitra Telo Izay Iray no manome antsika fampaherezana mandrakizay sy fanantenana tsara: « Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray ho amin’ny fanantenana velona, ​​araka ny haben’ny famindram-pony, tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. avy amin’ny maty ho lova iray tsy mety simba sy tsy misy loto ary tsy mety lo, izay tehirizina any an-danitra ho anareo izay tehirizin’ny herin’Andriamanitra amin’ny finoana ho amin’ny fahasambarana, izay voavoatra haseho amin’ny andro farany.”1. Petrus 1,3-5).
Nilaza ny apostoly Petera fa manana fanantenana velona isika noho ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no loharanon’ny fitiavana sy ny fahasoavana rehetra. Rehefa azontsika izany, dia hahazo fampaherezana lehibe sy homena fanantenana isika dieny izao sy ny ho avy. Izany fanantenana izany, izay mampahery sy mampahery antsika, dia mitarika antsika hamaly amin’ny teny sy asa tsara. Amin’ny maha-mpino mino fa nohariana araka ny endrik’Andriamanitra ny olona, ​​dia te-haneho hevitra tsara amin’ny hafa isika eo amin’ny fifandraisantsika amin’ny olona. Tianay ny hafa hahatsapa fampaherezana, hery ary fanantenana. Indrisy anefa fa raha tsy mifantoka amin’ny fanantenana izay misy ao amin’i Jesosy isika, dia mety hahatonga ny hafa hahatsiaro ho kivy, tsy ho tia, ho very hasina ary ho very fanantenana ny fifandraisantsika amin’ny olona. Izany no tena tokony hosaintsainintsika amin'ny fihaonantsika amin'ny olon-kafa rehetra.
Sarotra be ny fiainana indraindray ary miatrika zava-tsarotra isika eo amin’ny fifandraisantsika amin’ny hafa, fa eo amin’ny tenantsika ihany koa.Ahoana no hataontsika ray aman-dreny te hitaiza sy hanohana ny zanany rehefa miatrika olana? Ahoana no ataontsika mpampiasa, mpanara-maso na mpitantana manoloana ny olana amin'ny mpiasa na mpiasa? Miomana amin’ny fifantohana amin’ny fifandraisantsika amin’i Kristy ve isika? Ny marina dia tian'Andriamanitra sy omem-boninahitra ny mpiara-belona amintsika?
Mampahory ny miaritra ny fitenenana ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny fitondrana tsy ara-drariny, ary ny fandratrana. Raha tsy mifantoka amin’ilay fahamarinana mahagaga isika fa tsy misy mahasaraka antsika amin’ny fitiavana sy ny fahasoavan’Andriamanitra, dia ho mora levona isika ka hamela ny ratsy handatsaka antsika, ka mahatonga antsika ho kivy sy tsy ho voatosika. Misaotra an’Andriamanitra fa manana fanantenana isika ary afaka mampahatsiahy ny hafa ny fanantenana izay ao anatintsika sy mety ho ao anatin’izy ireo: “Fa manamasìna an’i Kristy Tompo ao am-ponareo. Aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin’ny fanantenana ao anatinareo, ary ataovy amin’ny fahalemem-panahy sy ny fahatahorana izany, ary manàna fieritreretana tsara, mba ho menatra izay manendrikendrika anareo, raha mahita. ny fitondrantena tsara ataonareo ho fitenenan-dratsy ao amin’i Kristy » (1. Petrus 3,15-16).
Inona àry no anton’ny fanantenana ananantsika? Ny fitiavana sy ny fahasoavan’Andriamanitra no nomena antsika tao amin’i Jesosy. Izany no fomba iainantsika. Mpandray ny famindram-pony isika. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ray dia tia antsika ary manome antsika fampaherezana tsy misy farany sy fanantenana azo antoka: “Fa Izy, dia Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra Raintsika, Izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin’ny fahasoavana. ny fonareo sy mampahery anareo amin’ny asa sy ny teny tsara rehetra » (2. Tes 2,16-17).
Noho ny fanampian’ny Fanahy Masina mitoetra ao anatintsika, dia mianatra mahatakatra sy mino ny fanantenana ananantsika ao amin’i Jesosy isika. Mampirisika antsika i Petera mba tsy hanary ny fahazotoantsika mafy: “Fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Voninahitra ho Azy ankehitriny sy mandrakizay! (2. Petrus 3,18).
Tamin'ny fiafaran'ny mozika Les Miserables dia nihira ny hira "Iza aho?" Jean Valjean. Ny hira dia mirakitra ny lahatsoratra: "Nomeny fanantenana aho rehefa nanjavona izy. Nomeny hery aho mba hahafahako mandresy ». Mety hisy hanontany tena raha avy amin’ny taratasin’i Paoly ho an’ny mpino tany Roma ireto teny ireto: “Fa Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoana, mba hitomboanareo hatrany amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina. » (Romana 15,13).
Noho ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty sy ny hafatra mifandray amin’ny fanantenana ho amin’ny hoavy mahafinaritra, dia tsara ny misaintsaina ny amin’ny fitiavana ambony indrindra nataon’i Jesosy: “Izay araka ny endrik’Andriamanitra dia tsy nanao izany ho fandrobana ny hitovizana amin’Andriamanitra, nanafoana ny tenany ka naka ny endriky ny mpanompo, dia nitovy tamin’ny olona ary nahafantatra ny maha-olona azy izy » (Filipiana). 2,6-7).
Jesosy dia nanetry tena mba ho tonga olombelona. Manome fahasoavana antsika tsirairay avy Izy mba ho feno ny fanantenany. Jesoa Kristy no fanantenantsika velona!
nataon'i Robert Regazzoli